मतदाताको को प्रश्न : ‘कम्युनिस्ट शासन आए निजी सम्पत्ति कब्जा र विहे गर्न पाउदैन हो ? – Saurahaonline.com
मतदाताको को प्रश्न : ‘कम्युनिस्ट शासन आए निजी सम्पत्ति कब्जा र विहे गर्न पाउदैन हो ?
दाङ, २ मंसिर । ‘कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि त हाम्रो निजी सम्पत्ति नि हुँदैन । घरजग्गा सबै सरकारले कब्जा गर्छ । आठ घन्टा अनिवार्य काम गर्नुपर्छ । बिहे पनि गर्न पाइँदैन । गरेको भए पनि सँगै बस्न पाइँदैन । यसो हो भने त हामीले कम्युनिस्टहरूलाई किन भोट दिने रु’ बिहीबार राजपुर गाउँपालिका–३ करंगाखोला पुगेको वाम गठन्धनका उम्मेदवार इन्द्रजित थारूलाई पानकुमारी बादीले प्रश्न गरिन् ।
पानकुमारीको यस्तो प्रश्नपछि इन्द्रजित अक्क न बक्क परे । इन्द्रजितले उत्तर दिनुअघि पानकुमारीलाई अरू के–के सुनेको छ भनेर उल्टै प्रश्न गरे । पानकुमारी पनि सुनेका कुरा सुनाउँदै गइन्, ‘आफ्नो लोग्नेलाई लोग्ने भन्न नि पाइन्न भन्छन् । छोराछोरी पनि बाउआमासँग बस्न पाउँदैनन् । बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लाग्छ । सरकारले जे भन्यो त्यो मान्नैपर्छ । नत्र सरकारले जे पनि गर्न सक्छ रे ।’
यी सबै कुरा उनले वाम गठबन्धनका उम्मेदवार पुग्नु एक दिनअघि मात्र गाउँमा सुनेको बताइन् । कम्युनिस्ट सरकार बने देशमा पूर्णतः निरंकुश शासन आउने र त्यसपछि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसिने भन्दै अघिल्लो दिन गाउँमा निर्वाचनको प्रचार भएको उनले सुनाइन् ।
स्थानीयको कुरा सुनेपछि उम्मेदवार थारूले यस्ता सबै कुरा भ्रम मात्र भएको बताए । ‘जनतालाई अझै रैती नै ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । केही मान्छे यस्तै भ्रम छरेर निर्वाचन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ढुक्क हुनुस्, कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि मुलुक अझै लोकतान्त्रिक र समृद्ध हुनेछ ।’ आजको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।